🥇 ▷ 7 barnaamij si aad u hesho saldhigyada gaaska ee jaban ✅
7 barnaamij si aad u hesho saldhigyada gaaska ee jaban
Qiimaha shidaalka ayaa si aad ah hoos ugu dhaca sanadka oo dhan, marka waa ay fiican tahay in la ogaado barnaamijyada kuu oggolaanaya inaad raadiso saldhigyada gaaska ee jaban iyada oo ujeedadu tahay in laga faa’ideysto shidaal ka qaadista xarumahaas adeegga ka raqiisan oo laga yaabo inay ku dhowdahay.
Dhammaan xarumaha gaaska waxay bixiyaan 95 ama 98 naaftada ama shidaalkaIn kasta oo saldhigyada oo dhami ay bixiyaan isku qiimo. Waxay kuxirantahay arrimo badan, laakiin inaad u aado kuwa ugu jaban waxaad badbaadin kartaa lacag xiiso leh dhamaadka bisha, wax hubaal ah ayaa kuu noqon doonta wax weyn.
Wax kasta oo la keydiyo waa la soo dhaweynayaa, waxaa jira dalabyo mobiladeed oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu raadsado saldhigyada gaaska ee ugu jaban agagaarkaaga, si ay iyaga ugu safraan oo ay shidaal uga helaan isla shidaalka had iyo jeer, laakiin lacag u dhaqaaleeya.
Gasall Waa mid ka mid ah barnaamijyada ay tahay inaadan hilmaamin. Tan diyaar u ah macruufka iyo Android waxayna soo bandhigaysaa muuqaal wanaagsan oo si fudud loo adeegsan karo, maadaama qalliinka lagu saleynayo isticmaalka khariidad is-dhexgal leh si loo helo saldhigyada gaaska ee ku dhow aaggaaga hadda.
Taasi waa, waxaad u baahan tahay goobta mar kasta oo aad rabto inaad ka tashato, habkaas, GasAll ayaa ku tusi doona kuwaas saldhigyada gaaska ee laga yaabo inay kuu soo dhowaadaan Meesha aad joogtid daqiiqadaas, halkaasoo aad ku baran karto midka ugu jaban.
Waad wax ka beddeli kartaa raadinta xargaha xarumaha adeegga, marka Km aad u yar aad dhigtid saldhigyada gaaska ee kayar way kaa tagi doonaan. Si kastaba, markaad aragto kuwa ugu dhow, waad arki kartaa keebaa ugu jaban, maxaa la yiraahdaa iyo xaggee iyo masaafada ay tahay.
Xitaa haddii aad gujiso saldhiga gaaska, waad ogaan doontaa jadwalka, qiimaha shidaalka taariikhda, inta ay ku kacayso buuxinta haanta iyo taariikhda cusboonaysiinta qiimaha shidaalka, iyo faahfaahinta kale oo si isku mid ah u xiiso badan.
Kala soo bax GasAll ee macruufka
Kala soo bax GasAll Android
Qiimaha Gawaarida Degdega ah
Codsi kale oo ay tahay inaadan ku dhaafin mobilkaaga Android waa Qiimaha Gawaarida Degdega ah. Barnaamijkan ayaa adeegsanaya istiraatiijiyad mugdi ah, laakiin in kabadan oo ku filan ujeedada uu bixinayo, oo aan ahayn wax ka badan tusida saldhigyada gaaska ee jaban.
Waxaad ku arki kartaa kuwa kuugu dhow booskaaga dhammaan macluumaadka ku saabsan xarunta gaaska iyo qiimaha, ka arag taariikh qiime leh garaafyo ilaa iyo 4-tii toddobaad ee la soo dhaafay oo xitaa u dhig sida kuwa aad ugu jeceshahay ama kuwa booqashooyinka badan booqda.
Tafaasiisha xiisaha leh ayaa ah waad dejin kartaa digniinaha isbeddelka qiimaha, taasi waa, marka xarun gaas kor u qaado qiimaha shidaalka X ee qiimaha aad adigu cayintay, appku wuxuu kugu soo wargalin doonaa xaqiiqdaas adiga oo tixgelinaya.
Kusoo Degso Qiimaha Batroolka Si Loogu Daweeyo Android
Saldhigyada gaaska ee Spain
Saldhigyada gaaska ee Spain Waa codsi kale oo loogu talagalay macruufka iOS kaas oo sidoo kale kuu oggolaanaya inaad hesho saldhigyo gaas oo rakhiis ah guud ahaan juqraafi ahaan Isbaanishka. Waxay leedahay isla hawlgal la mid ah codsigii hore, khariidad ayaa soo muuqanaysa meesha aad ka arki karto rugaha adeegga.
Sidoo kale, barnaamijku wuxuu muujinayaa a miiska amar laga soo bilaabo ugu hooseeya ilaa qiimaha ugu sarreeya inaad dejiso markaad soo degsatay oo aad rakibtay app-ka, si aad si waadax ah u arki karto taas oo ah saldhigga gaaska ugu raqiisan jagadaada waqtiga wada tashiga.
Wixii ku saabsan xarunta gaaska ayuu yiri waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan qiimaha, cinwaanka, magaca, masaafada aad joogtid iyo xitaa waxay kugu kacayso inaad misaaniyadaada si buuxda u buuxiso iyo wixii aad ku bixin lahayd gaarigaaga si aad ugu soo guurto.
U soo dejiso Gasolineras de España macruufka
Ku keydi gaaska. Saldhigyada gaaska ee jaban ee Spain
Waxaan sii wadnaa codsiyada badan, markan waxay ku dhowdahay Ku keydi gaaska. Saldhigyada gaaska ee jaban ee Spain, waa barnaamij gaar ah oo loogu talagalay aaladaha Android, gabi ahaanba waa bilaash oo waxaa lagu heli karaa luqada Isbaanishka oo bixisa is-faham guud.
Halkan waxaad ka raadin kartaa gaas rakhiis oo raqiis ah gobol ahaan, ama hadaad rabto meesha, taasi waa, lamid tii codsiyadii hore, oo ku tusaya saldhigyo ay kuxiran yihiin qiimayaal iyadoo loo eegayo booska uu ka helay GPS-ka mobiilka waqtigaas.
Sidoo kale, rugaha gaaska ee lagala tashaday waxay bixiyaan macluumaad badan oo xiiso leh oo hadaadan rabin inaad aragto waxaad ku dari kartaa meelaha aad ugu jeceshahay sidaa darteed marwalba waxaad gacanta ugu haysaa inaad hubiso qiimaha shidaalka oo aad is barbar dhigto kuwa kale.
Kusoo Degso Badbaadinta Gaas. Saldhigyada gaaska ee jaban gudaha Spain ee Android
CombusFree Waa codsiyo kale oo ay tahay inaad isku daydo, gaar ahaan maxaa yeelay waxaad arki kartaa qiimaha dhammaan xarumaha gaaska ee kugu dhow sidaas darteedna waxaad sameyneysaa daraasad taas oo ah tan ugu jaban dhammaan, sidaa darteed, u gudub maalintaas si aad shidaal u hesho.
Waxaad si toos ah ugu arki kartaa qiimaha dusha khariidada, maxaa yeelay Calaamad yar oo leh magaca iyo qiimaha ayaa u muuqan doona xarun kasta oo gaas, in kasta oo aad gujiso mid kasta oo ka mid ah waxaad heli doontaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan saldhiga adeegga ee lagala tashaday.
U soo dejiso CombusFree ee macruufka
Soodejiso CombusFree ee Android
GasAlert, sida uu eraygiisu muujinayo, waa dalab hadaf leh abuuraan ogeysiisyo adeegsadaha saldhigyada gaaska ugu raqiisan iyadoo loo eegayo jagada hada jirta iyo qiyaasta kale ee loo habeeyay, si had iyo jeer aad uhesho kuwa ugu jaban.
Markaa, isticmaaleygu wuxuu go’aamin karaa in 11-ka subaxnimo uu doonayo digniin ee xarumaha shidaalka ee ugu raqiisan gudaha masaafo dhan 20 km u jirta goobtiisa, had iyo jeer laga bilaabo Isniinta ilaa Axadda, si uusan qasab ugu ahayn inuu maalin walba raadsado.
Sidoo kale waa mid kale oo ka mid ah codsiyada kuwaas oo waxaa jira khariidad caadi ah oo lagu muujiyo saldhigyada gaaska oo tag oo arag qiimahooda cusboonaysiinta iyo goobta
Kala soo bax GasAlert for Android
Codsigii ugu dambeeyay ee aan kugula talineyno inaan ku helno saldhigyo gaas oo raqiis ah waa Gaspal, barnaamij loo heli karo macruufka iyo Android. Sida kuwii hore, Gaspal Waxa kale oo ay bixisaa khariidadda caadiga ah halka ay tagayso markay arkaan xarumaha shidaalka ee u dhaw iyo qiimahooda.
Faahfaahin muhiim ah ayaa ah koodh gaas ayaa mid walba ka muuqda, hadii uu cagaaran yahay waxay la macno tahay in qiimaha uu aad u fiican yahay, hadii uu buluug yahay qiimahoodu waa fiican yahay, hadii oranjiga uu u muuqdo in qiimuhu dhexdhexaad yahay iyo hadii uu casaan yahay, waxay la micno tahay in rugtu bixiso qiimo sare.
Sidoo kale, markaa waad heli kartaa a Liiska kuu oggolaan doona inaad ku sawiro saldhigyada gaaska ee ugu jaban iyo xitaa kuwa ugu qaalisan, kuwa uu kugula taliyay dalabka iyo kuwa kuugu dhow iyadoo kuxiran meesha.
Kala soo bax Gaspal ee macruufka
Kala soo bax Gaspal Android
Waxbadan ayaa jira codsiyada lagu raadinayo saldhigyada gaaska ee jaban, dhammaantoodna waxay leeyihiin ku dhawaad ​​isku hawl, sidaa darteed ha ilaawin inaad ku tijaabiso dhamaantood si aad u aragto midka aad ugu jeceshahay, wax walba waxay kuxiran doonaan baahiyahaaga iyo midka aad jeceshahay midka ugu badan.